Madaxweynaha Dalka Nigeria Oo Markale Isa Soo Sharaxaya Isaga Oo 74 Jir Ah | Haqabtire News
Madaxweynaha Dalka Nigeria Oo Markale Isa Soo Sharaxaya Isaga Oo 74 Jir Ah
Nigeria:-(HTN) Madaxweynaha dalka Nigeria Maxamed Bukhaari (Mohamadu Buhari) ayaa shaaciyay in uu mar labaad isu soo shaxayo doorashooyinka madaxweynenimo ee dalkaas, kuwaas oo lagu wado in ay dhacaan sanadka soo socda.
Tani waxa ay soo afkaraysaa muddo bilo ah oo hubanti la’aan ay ka jirtay in uu isa soo sharaxayo iyo in kale.
Caafimaadka madaxweynaha ayaa intii muddo ahba laga deeyrinayay, waxayna dad badan u arkeen in uusan markale xamili karin xilka culus ee madaxweynenimada, kaas oo muddo badan baaris caafimaad dalka dibediisa ugu maqnaa.
Sanadkii 2015-kii ayaa xilka loo doortay, isaga oo noqday musharixii koowaad ee taariikhda dalkaas oo ka tirsan mucaaradka oo doorasho kaga guuleystay madaxweyne xilka haya. Waxa uu xilka kala wareegay madaxweyne Goodluck Jonathan.
Buhari hadda waxa uu ku suganyahay dalka UK, halkaas oo uu kulamo la yeelanayo Ra’isulwasaaraha dalkaas Tharesa May.
Waxa uu doorashooyinka u matali doonaa xisbigiisa All Progressives Congress, kaas oo aan balse wali si rasmi ah ugu dhawaaqin musharixiisa rasmiga ah.
Madaxweynihii hore ee Nigeria Olusegun Obasanjo ayaa ugu baaqay in uusan markale isa soo sharixin, isaga oo sabab ka dhigaya da’diisa iyo caafimaadkiisa.
Afhayeen u hadlay Buhari ayaa sheegay in eedeymaha loo jeediyay uu ku aqbalay si niyad sami ah, balse waxa uu hoosta kaa xariiqay in intii uu xilka joogay la sameeyay horumar aad u badan.